Kooxda Gobolka Liibaan Oo Si Xarago Leh Ugu Gudubtay Wareega Labaad
Jigjiga, (CN) khamiis, 05 Nov 2015,Kooxda gobalka liibaan oo si xarago leh ugu gudbay wareega labaad ee tartanka ciyaaraha ,iyagoo 3-0 kaga badiyay kooxda G/ Nogob . Ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xiisa badan ,iyadoo labada kooxodba ay haysteen dhibco fiican oy ugu gudbi karaan wareega labaad ee ciyaaraha, balse waxay mid walba doonaysay inay kusoo baxdo kaalinta koobad ee guruubkoda.Hadaba ciyaartan ayaa ahayd mid kooxda G/ liibaan soo ban dhigeen ciyaar wanaag iyagoo galinkii hore ciyaarta dhashaday labo gool. Iyagoo goshii 3aad na dhashaday galinkii danbe ee ciyaarta halkaas oy ciyaartu ku dhamaatay 3-0.
Waxaa kaloo ciyaar aad u xiiso badan dhexmartay kooxda M/DH/Buur Vs M/ GODEY.
Ciyaartan ayaa ahayd mid kooxda M/Dh/Buur soo ban dhigeen cyaar fiican iyagoo galinkii hore ciyaarta dhashaday hal gool,balse galinkii danbe ee ciyaarta ayay kooxda M/Godey la yimaadeen goshii barbarada, ciyaartiina ay ku dhamaatay 1-1, Laakiin kooxda m/ godey ay u gudbeen wareega labaad e ciyaaraha.
Kooxda M/Qabridahar Oo Goolashii Ugu Badnaa Kaga Badiyay G/ Dollo.
Jigjiga (CN) Arbaco, Nov, 04, 2015, Ciyaartii ugu xiisaha iyo goolalka badnayd ayaa saaka ka dhacday gooranka kubada gacta ee caasimada Jigjiga, ciyaartan ayaa ahyad mid kooxda M/Qabridaha weerar aan kala istaag lahayn ay ku hayeen kooxda G/ Dollo oy waliba la socdaan goolal 5 ah iyadoon wali lagu kala badinin goolal intaa la eg, goolashan ayaa ahaa kuwa kooxda M/Qabridahar ay dhashadeen galinkii hore ee ciyaarta iyadoy kooxda G/Doollo ay dhashadeen hal gool oo kali ah. Halkaasoo galinkii hore ee ciyaarta lagu kala baxay 5-1. Hadaba galinkii danbee ciyaarta ayaa ahayd mid dagan oon wax weerar ah oo badan lahayn wax gool ahna aan laka dhalin,gabagabadii ciyaartuna ku dhamaatay 5-1, Kooxda M/ Qabridaharna ugu gudbeen wareega labaad ee ciyaaraha.
Waxaa sidoo kale wada ciyaaray kooxda G/ Jarar Vs G/ Shabeele. Waxaa galinkii hore iskamaa mulanayay ciyaarta kooxda G/ Jarar , kadib markii ay dhashadeen gooshii kobaad ee ciyaarta, balse kooxda G/ Shabeele ayaa la wareegtay ciyaartii iyadoo durba la timid goshii barbarada,iyagoo weerarkoodiina siiwatay tasoo u suura galisay inay dhashadeen goshii labaad ee guusha, ciyaartiina ku dhamaatay2-1. Halkaas ooy kooxda G/Shabeele ugu gudbeen wareega labaad ee ciyaaraha.
Kooxda G/ Qoraxey ayaa iyaguna u gudbay tartanka wareega labaad ee ciyaaraha, kadib markii ay barbaro la galeen kooxda G/ Sitti. Ciyaartan ayaa ahayd mid kooxda G/Sitti ku gacan sareeyeen galinkii hore ee ciyaarta iyagoo ku hogaaminayay 1-0. Balse kooxda G/Qoraxeey oo ka rajo dhawayd kooxda G/Sitti, ayaa ku dadaashay say ku heli lahaayeen goosha barbarada si ay ugu gudbaan wareega labaad ee ciyaaraha waxayna gabagabadii ciyaarta heleen goshii barbarada, halkaasooy ciyaartu ku dhamaatay barbaro 1-1, laakiin kooxda G/Qoraxeey u gudbeen wareega labaad ee ciyaaraha.
ciyaartii dhexmartay kooxda G/afdheer vs m/ Godey
JIGJIGA (CN) Isniin, 02, Nov, 2015 Sidaad wada ogsoontihiin waxaa xarunta DDSI ee Jigjiga ka socda tartankii 5aad ee kubada cagta, hadaba maantoo isniin ah waxaa fooda is daray labada kooxod ee kala ah kooxda G/ Afdheer vs M/M Godey iyadoo labada kooxodba ay soo ban dhigeen ciyaar aad u wanaagsan weerar iyo weerar celisna ah ayay labada kooxodba galinkii hore ciyaarta ku baxeen barbaro 1-1 ah. Hadaba markii la iskusoo laabtay galinkii danbe ee ciyaarta ayay Gobalka Afdheer dhashatay gool labaad tasoo xiiso u yeeshay ciyaarta , balse kooxda M/M/Godey ayaa gool jawaab ah ka dhaliyay G/ Afdheer halkaas oy ciyaartu ku dhamaatay barbaro 2-2 ah
Waxaa sidoo kale ciyaar xamaasad iyo xiiso wadata wada ciyaaray, Kooxda G/Shabeele vs M/M/Qabdahar, ciyaartan ayaa ahayd mid M/Qabridahar soo ban dhigeen ciyaar-wanaag iyagoo galinkii hore ciyaarta la yimid hal gool laguna kala baxay 1-0 , ayaa la iskusoo noqday galinkii dabe ee ciyaarta iyadoo kooxda M/qabdahar sii wadeen weerarkodii una labeyeen , ayay kooxda G/Shabeele la timid ciyaar wanaag ka duwan tii ay daqiiqadihii hore ciyaarayeen iyagoo daqiiqadii 80 la yimid hal gool ciyaartiina noqotay mid aad u kulul, iyadooy kooxda gobalka shabeele siiwateen weerarkoodi lana yimaaden gooshi labaad e barbarada labadii daqiiqo ee dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta halkaas oy ciaartu ku dhamaatay barbar 2-2 ah
Tartanka Ciyaaraha Ee Taladada
jigjiga,(CN) Talaado, 03, Nov, 2015 Waxay saaka ciyaar xiiso iyo xamaasad wadata dhexmertay labada kooxod ee kala ah , kooxda G/Faafan vs G/ Sitti . Ciyaartan ayaa ahayd mid kooxda gobalka sitti ku bilaabeen ciyaar wanaag iyo weerar tasoo keentay inay goosha kobaad dhaliyaan,balse kooxda gobalka faafan ayaa isla galainkii horaba ka jawaabay iyagoo la yimid gooshi barbarada, laguna kala baxay barbaro 1-1 ah. Hadaba markii la iskusoo noqday galinkii danbe ee ciyaarta ayay labada kooxod la yimaaden ciyaar wanaag weerar iyo weerar celis ah. Laakiin kooxda G/ faafan ayaa daqiiqadii 75aad la yimid goshii labaad tasoo ciaarta ka dhigtay mid aad u kulul guushana ku raacday Kooxda Gobalka Faafan ciyaatuna ku dhamaatay 2-1.
Ciyaar aad u qiima badan ayaa dhexmartay labada kooxod ee kala ah Kooxad G/ Nogob Vs M/ Jigjiga. Ciyaarta dhexmartay labada kooxod ayaa ahaa mid ay ciyaartodu aad u xiiso badnayd oo labada kooxodba ay is weerarayen, balse wax gool ah aan la kala dhalinin galinkii hore, ciyaartana lagu kala baxay barbaro 0-0 ah. Hadaba Kooxda Gobalka Nogob ayaa la Timid ciyaar wanaag ka duwan tii galinkii hore ay ciyaarayeen, tasoo sababtay inay dhashadaan hal gool ciyaartiina ku dhamaatay 1-0
Waxaa kale oo maanta galinkii danbe wada ciyaaray Kooxda G/ Afdheer Vs M/ DH/ Buur ciyaartan ayaa ahayd ciyaar labada kooxodba ismari waayeen galinkii hore ciyaarta laguna kala baxay barbaro 0-0 ah hadaba galinkii dabe ee ciyaarta ayay kooxda gobalka afdheer latimid ciyaar wanaag iyo waliba hal gool halkaas oy ciyaartu ku dhamaatay 1-0.
Ciyaarti Dhexmartay kooda Gobalka LIIBAAN iyo kooxda m/m JIJIGA
Jijiga(CN) Sabti 31 October 2015, waxaa maanta ciyaaray labada kooxood ee kala ah, kooxda gobalka Liibaan iyo kooxda m/m Jigjiga, ciyaartan dhexmartay labada kooxood ayaa ahayd ciyaartii ugu kululayd uguna goolal badneyd ee la ciyaaro taniyo intii uu bilowday koobku . hadaba iyadoo galinkii hore ee ciyaarta labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar wanaag goolol la iskugu jawaabayo ayaa galinkii hore ee ciyaarta lagu kala baxay barbaro 2-2 ah . balse markii la iskusoo noqday galinkii danbe ee ciyaarta ayaay kooxda gobolka liibaan la timid ciyaar wanaag kaduwan tii galinkii hore iyo waliba 2 gool ,halkaasoy guusha ku raacday kooxda gobalka liibaan ciyaartiina ay ku dhamaatay 4-2
Tartankii Ciyaaraha Kubada Cagta Ee 9ka Gobol Iyo 4ta Maamul Magaalo Ayaa Ka Furmay Caasimada Jigjiga
Kulanka Gobolka Qoraxay Iyo Gobolka Faafan
Kulanka Gobolka Shabeele Iyo Gobolka Doollo
Jadwalka Tartanka Ciyaaraha